Location: Mbido » Ịdee » Kwado » Mmadụ atọ bụbu ndị isi ala Afrịka na-edu ọgbakọ nchekwa mba Rwanda ọhụrụ
Gọọmenti Rwanda ahọpụtala mmadụ atọ bụbu ndị isi ala Afrịka ka ha duruo ọgbakọ nchekwa mba ụwa ga-ebido na Kigali na mbido Maachị afọ a.
Akụkọ sitere na Ministry of Environment nke Rwanda na-egosi na gọọmentị Rwanda ahọrọla mgbe ahụ rịọ ndị isi obodo atọ nke Africa ka ha duo nnọkọ mmeghe nke mba ahụ. International Union maka nchekwa nke Nature (IUCN) Ogbako Africa Protected Area Congress (APAC) ga-eme na Kigali site na Maachị 7 ruo 12 nke afọ a.
Ndị isi mba Afrịka ahọpụtara n'oge gara aga bụ Prime Minister of Ethiopia Mr. Hailemariam Desalegn, onye bụbu onye isi ala Niger Mr. Issoufou Mahamadou, na onye bụbu onye isi ala Botswana Mr. Festus Mogae.
N'ịbụ nke na-eme n'Africa maka oge mbụ, ndị IUCN, Gọọmenti Rwanda, na Africa Wildlife Foundation AWF ga-enwe nnọkọ ahụ. A ga-enwe nzụkọ a n'oge dị oke egwu mgbe Africa chọrọ ihe karịrị ijeri US $ 700 maka nchekwa na nchekwa nke ụdị ndụ dị iche iche.
A na-atụ anya na ogbako (nzukọ) ga-eme ka ọnọdụ nchekwa na Africa dịkwuo elu site na itinye aka na gọọmentị, ndị ọrụ nzuzo, ọha mmadụ, ụmụ amaala obodo, na ndị obodo mgbe ahụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ iji kpụzie atụmatụ Africa maka ebe nchekwa na ebe nchekwa, ụlọ ọrụ Rwanda nke gburugburu ebe obibi kwuru. na nkwupụta.
A na-atụ anya na onye bụbu praịm minista Etiopia Hailemariam Desalegn ga-atụle ụzọ ga-eme ka uto akụ na ụba na nchekwa nke isi obodo Africa guzozie.
"Ọ ga-adị mkpa ka eme nke a site na nhọrọ atụmatụ na ntinye ego nke ihe ọmụma kacha mma dị na echiche ogologo oge na-akwalite," Desalegn kwuru.
Mịnịsta na-ahụ maka gburugburu ebe obibi Rwanda, Jeanne d'Arc Mujawamariya kwuru na nke a abịala n'oge kwesịrị ekwesị n'agbanyeghị na a ka nwere ụzọ aga.
O kwuru, "APAC na-abịa n'oge a na-abawanye nlebara anya zuru ụwa ọnụ na mmekọrịta anyị na ihe okike mana anyị anaghị etinye ego zuru oke na sistemu eke anyị dabere," ka o kwuru.
O kwuru na nkwupụta ya na Africa na-emefu ihe na-erughị pasenti iri nke ihe a chọrọ iji chekwaa na iweghachi ihe okike.
"Ebe echedoro ga-enwerịrị ike ịnweta ego achọrọ maka njikwa dị irè ma si otú a rụzuo ọrụ ha n'inye nchebe dị iche iche nke ihe ndị dị ndụ na gburugburu ebe obibi maka ndị mmadụ na mmepe," ka o kwuru.
Mahamadou, otu n'ime ndị isi ọgbakọ ahụ kwuru na ikike ọchịchị kwesịrị ịkpụzi mkpebi ga-emetụta ọdịnihu Africa.
"APAC na-achọ ụma zụlite mkparịta ụka ndị na-ewulite ma na-enye ndị isi ugbu a na ndị na-esote ọgbọ aka ịghọta ọdịnihu Africa ebe a na-eji ihe dị iche iche dị iche iche kpọrọ ihe dị ka ihe onwunwe na-enye aka na mmepe," ka o kwuru.
Ọ gbakwụnyere na nzụkọ mmeghe ahụ bụ iji gbanwee ihu nchekwa na ibu ụzọ mbelata mgbanwe ihu igwe n'ọtụtụ buru ibu.
Mogae, onye isi ọgbakọ ọgbakọ, kwughachiri na APAC ga-abụrịrị mgbanwe maka mmekọrịta dị n'etiti obodo zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ Africa.
“Dịka ndị Africa, anyị ghọtara ọrụ dị mkpa nke obodo ụwa na otu mba ụwa rụrụ n'ime afọ 60 gara aga. Ọ dị mkpa ka obodo na ụlọ ọrụ dị n'Africa tinye aka n'ọrụ na atụmatụ nchekwa maka inwe na ntinye n'ime ọchịchọ na ọhụụ maka Africa anyị chọrọ," ka o kwuru.
Ọzọ na: Anụ ọhịa | Rwanda | Government | Africa | Kigali | Ethiopia | Botswana
Nkwupụta maka nyocha nke ọnwụ na Exuma sitere na Bahamas Prime Minister Chester Cooper na-eme ihe Government|
Ebe akụkọ ihe mere eme America kacha egwu egwu na 2022 Government|
Kedu ihe pụtara ezigbo njem na Mariott Bonvoy? Anụ ọhịa|
Africa Botswana Ethiopia Government Kigali Rwanda Anụ ọhịa
Ụlọ ọrụ njem kacha mma: ebe obibi efu...